musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » Yanina Gavrilova ndiye wekutanga wekuUkraine Tourism Gamba
Awards • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Ukraine Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Iyo Horo yeInternational Tourism Magamba yakavhurwa nekusarudzwa chete kuti uone avo vakaratidza hunoshamisa hutungamiriri, hunyanzvi, uye zviito. Tourism Magamba anoenda padanho rekuwedzera. Yanina Gavrilova ndiye munhu wekutanga kubva kuUkraine kukokwa, uye akatambirwa kuve gamba rekushanya neWorld Tourism Network.
Sangano reWorld Tourism Network rakaziva Muzvare Yanina Gavrilova kuti vabatane neboka rakasarudzika reMagamba Ekushanya.
Kubva 2016 Amai Gavrilova vanga vari Musoro weBhodi yeCivic Union, iyo Ukrainian Yevashanyi Guides Association
Yanina Gavrilova ndiye munyori wemakosi ekudzidzisa kureba kwenyanzvi ruzivo, mamaneja, uye vamiriri veUnited Territorial Communities mumunda wekusimudzirwa kwekushanya nenzvimbo dzekushanya dzemuno "Kubudirira kutanga mukushanya," kosi yekudzidzisa magweta evaenzi - "Sangano uye mufambiro gastronomic tours ".
"YeUkraine Vatashanyi Guides Association" ndiyo inotungamira mubatanidzwa wevashandi muUkraine. Kubva kutanga kwe COVID-19 denda, iyo "YeUkraine Vatashanyi Guides Association" yakawedzera nhengo yayo.
- Murairidzi wezvekushanya anoranga uye nzira dzevakuru dzidzo, murairidzi weDVV-International.
- Nhengo yeboka rehunyanzvi reHurumende Sisitimu Yekuvandudza Tourism yeUkraine (DART).
- Mumiriri muUkraine weEuropean Federation yeVashanyi Vanotungamira Masangano uye iyo World Federation yeVashanyi Vanotungamira Masangano.
Kwemakore mashanu apfuura, Yanina Gavrilova akagadzira zvinyorwa zvemanyorerwo:
- pane hunyanzvi hwesangano revashanyi ruzivo nzvimbo,
- pane kugadzirirwa kwevatashanyi vatungamiriri pane hunyanzvi hwekududzira zvakasikwa, tsika nemagariro nhoroondo.
Kuwedzera nyanzvi chiitiko:
2014-2021 Yanina Gavrilova akatora chikamu pabasa rekuronga makomiti kweanopfuura makumi mashanu emisangano uye kubvunza, mashopu, misangano, uye maforamu einfo-nyanzvi, vatariri vevashanyi, uye mamaneja:
- 2021 Project USAID ERA Ukraine, Gungwa reAzov Yevashanyi Ruzivo Center Center Gweta.
- vakaita kudzidziswa kwehunyanzvi hweTIC muKyiv muna 2016-2018;
- vakapinda muchikamu semukurukuri wekutanga paMusangano wekutanga weVamiriri veTIC muna 2016 muLviv;
- 2019-2020 yakaitisa nhevedzano yekutaurirana kwemaneja eTICs muDnipro, Chernihiv, Kherson;
- muna 2021 yakabata kubvunzurudza kwevashandi vekushanyirwa pakagadzwa TIC muOlevsk;
- 2012-2013 Nyanzvi yeiyo EU chirongwa "Kuparadzanisa uye kutsigira kwekushanya muCrimea";
- 2010-2012 Nyanzvi pane basa revashanyi ruzivo nzvimbo mune chirongwa Chemonics International Inc, USAID / LINK;
- 2012. Yakagadziriswa uye yakaitiswa internship yeUkraine TIC nyanzvi muEstonia neSweden.
Mukusarudzwa kwakagamuchirwa iyi mhinduro yakaverengerwa: Yanina munhu anoshamisa anoshandisa simba rake rese uye simba rake rese mukusimudzira kwekushanya. https://en.uaguides.com
Yanina ikozvino akanyorwa pane magamba.travel uye ndichave nemukana wekusarudzwa Tourism Hero yeGore. Iko hakuna kumbobhadhariswa.
Zvegore kana Zvakakosha Tourism Gamba Mubairo inoendeswa kunhengo dzakasarudzwa dze Horo yeInternational Tourism Magamba. Iyo yakavhurika kune nhengo uye asiri - nhengo dze World Tourism Network. Iko hakuna mutengo.
The Yegore Rekushanya Gamba reMubairo wegore inoendeswa kunhengo dzakasarudzwa dzeImba yeInternational Tourism Magamba.
Zvinotora kanenge maviri mazita ekuti atariswe pakuzivikanwa uku. Imwe inogona kuve yekuzvisarudzira. Chero ani anokwanisa kusarudza kana anogona kudomwa pane www.mapfumo.travel